ခေတ်မှီဆန်းပြားပစ္စည်းများ Tech | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ခေတ်မှီဆန်းပြားပစ္စည်းများ Tech
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jan 7, 2011 in Community & Society, Computers & Technology, Cultures, My Dear Diary | 12 comments
လူတွေဟာ ကိုယ်နားမလည်တဲ့ အရာတွေနဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရတော့မယ်ဆိုရင် ဇဝေဇဝါ ဖြစ်စိတ်ကနေ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုအထိ အမျိုးမျိုး ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ အသစ်တွေက သိပ်ခေတ်မှီ၊ အသုံးပြုသူကိုယ်၌က ရိုးစင်းလွန်းနေရင် ပိုဆိုးပါတယ်။ လူအများစုဟာ လက်ရှိကျင့်သားရနေတဲ့ နည်းပညာ၊ စည်းမျဉ်းဥပဒေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် စတာတွေနဲ့ပဲ နေထိုင်သွားလိုကြပြီး အပြောင်းအလဲကို များသောအားဖြင့် အခြေအနေတရပ်က မဖြစ်မနေတွန်းပို့မှ ရွေ့ချင်ကြပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ ပုံစံတွေထဲမှာ နည်းပညာ အပြောင်းအလဲက အသိသာဆုံး ဆန့်ကျင်ခံရမှု အနဲဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ဝတ္တုဆန်တာကိုး၊ ဒါတောင် လုပ်ငန်းသုံး ပင်မဆော့ဖ်ဝဲလို့ စစ်စတမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးကြီးမားမား အပြောင်းအလဲမျိုးဆို ပြောင်းချင်သူ ဆရာများရော လက်တွေ့ထိတွေ့ရသူများပါ အတော်ခေါင်းစား ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှာ ၂၀၀၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှ မိုဘိုင်းဖုံးလေးတွေ ခေတ်စားလာတာပါ။ အဲဒီအရင်က မရှိဘူးမဟုတ် ရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အရပ်ထဲရွာထဲမှာ ပေါပေါလောလော မတွေ့ရသေးပါဘူး။ တနေ့မှာ မြို့ထဲသွားတော့ ဆသရက ထုတ်ပေးကာစ ကုမ္မဏီပိုင် မိုဘိုင်းလ်ဖုံးကို ယူသွားပါတယ်။ အဲဒီတုံးက ဟန်းဖုန်းတွေက ကြီးပြီးလေးပါတယ်။ Nokia ဖုံးလို့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်လည်း ဘဏ်စာရေးမတွေရှေ့ ဟန်းဖုံးလေးနဲ့ ပဲပေးတာပေါ့လေ။ ဖြစ်ချင်တော့ ဖုန်းမြည်လာပါတယ်။ ကျနော်လည်း မိုဘိုင်းလ်ဖုံးကို သူများ ပြောတဲ့အချိန် ဝင်ပြောဖူးတာကလွဲလို့ လက်တွေ့မသုံးဘူးတော့ ဝင်လာတဲ့call ကို ဘယ်လို လက်ခံရမှန်း မသိပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ လူကြားထဲ တဂွီဂွီမြည်နေတဲ့ဖုန်းကို ဘောင်းဘီးအိတ်ထဲထည့်ပြီး ကိုယ် မဟုတ်သလို နေခဲ့ရပါတယ်။
ပိုဆိုးတာ မဆလခေတ်မှာ လိုင်းဖုံးတောင် အစိုးရအရာရှိ၊ လည်လည် ဝယ်ဝယ်ရှိသူများသာ သုံးနိုင်ကြလို့ တယ်လီဖုံး စကားပြောခွက်ကို စကားပြောရင် ဘယ်လိုသုံးရမယ် ဆိုတာကောင်ကောင်း မသိကြသူ အများအပြားပါ။ ခုနှစ်အိမ် ရှစ်အိမ်ကြား အော်ဟစ်ပြောသူနဲ့၊ စကားပြောခွက် ဖင်နဲ့ခေါင်း ပြောင်းပြန်ထားပြောသူ အစုံပါပဲ။ တလောက အမေစု ပြန်လွတ်လာတော့ မိုဘိုင်းဖုံးကို ကောင်းကောင်း မသုံးတတ်ဘူးလို့ ဝန်ခံပါတယ်။
နောက်တခုက ဓါတ်လှေခါးပါ။ ငယ်စဉ်က ဓါတ်လှေခါးဆိုတာကို ဆေးရုံကြီး၊ ရွှေတိဂုံဘုရားနဲ့ အချို့ အစိုးရရုံးများမှာသာ တွေ့ဖူးစီးဖူးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေကလည်း အစောင့်မောင်းပေးမှ စီးခွင့်ရှိတဲ့ အများသုံး ဓါတ်လှေခါးတွေပါ။ နောက်ပိုင်း အဆောက်အဦးအချို့မှာ ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်လှေခါး ပါလာတော့ ကိစ္စရှိလို့သွားရင် ဘယ်လို ဓါတ်လှေခါးစီးရပါ့မလဲလို့ တွေးပူခဲ့ပါသေးတယ်။
အလုပ်ထဲမှာ အာရှဓနဘဏ်က ထုတ်ပေးတဲ့ အကြွေးဝယ်ခွင့်ကတ်အကြောင်း ပြောကြတော့ မယုံပါဘူး။ ATM ကတ်လို အကောင့်ထဲ ကိုယ့်ငွေထည့်ပြီး လက်ငင်းသုံးပဲသိပြီး ခရက်ဒစ်ကတ်လို သူများငွေသုံး သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ပြန်ပေးရင် အတိုးမရှိဆိုတာ မဖြစ်နိုင်လို့ ထင်ခဲ့တာပေါ့လေ။ ကိုယ်ကလည်း နိုင်ငံခြားထွက်ခါနီးဆိုတော့ ဘယ်လိုဆိုတာ စိတ်ဝင်တစား မစုံစမ်းမိခဲ့ပါဘူး။ နိုင်ငံခြား ရောက်တော့မှ စားသောက်ဆိုင်မှာကျွေးပြီး ငွေရှင်းတဲ့အခါ ခရက်ဒစ်ကတ် သုံးပုံသုံးနည်းတွေ့ရတော့ တယ်ဟုတ်ပါလားလို့ သိရပါတော့တယ်။ ခရက်ဒစ်ကတ်သုံးရင် ပိုက်ဆံလည်းနောက်မှပေးရ၊ ကိုယ့်ရဲ့ ခရက်ဒစ်မှတ်တမ်းလည်းကောင်း၊ သုံးသမျှလိုက်လို့ တက်လာတဲ့ပွိုင့်တွေကိုစုပြီး ကိုယ်လိုတာဝယ်လို့ ရတာမို့ အတော်ဟန်ကျပါတယ်။ ချက်ချင်းငွေသားနဲ့မထွက်တော့ လို၏မလို၏ မစဉ်းစားဘဲ နင်းကန် ဝယ်မိလို့ အကြွေးပိကြသူတွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အကောင်းအဆိုး ရောနေတာပေါ့လေ။
အင်တာနက် သုံးနည်းကြတော့ အလုပ်ထဲ သုံးခွင့်ရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာဆရာကို မေးကြည့်ပါတယ်။ သူက တဂွီဂွီတဂွမ်ဂွမ်နဲ့ ဖုံးလိုင်းကနေ ဆာဗာကို လှမ်းချိတ်နေရင် မယောင်မလည် အနားသွား စပ်စု ပါတယ်။ သူကဟောသည်လိုသွား ဟောသည်လိုနှိပ် တနေရာပြီး တနေရာသွားတာ ပြပါတယ်။ ကလစ် ကလစ်နဲ့မို့ ကိုယ်လိုက်မမှီလေ သူဒေါကန်လေပါပဲ။ အင်တာနက်ဆိုတာ မုဆိုးဆိုင်သင် လုပ်ရင်းနဲ့မှ တတ်တာမျိုးပါ။ အင်တာနက်သုံးတတ်ကာစ တိုင်းပြည်တွေမှာတော့ မသိသူများကို သင်တန်းဆိုပြီး ရိုက်စားကြပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရောက်တော့ အသိအိမ်က ကွန်ပြူတာနဲ့ အင်တာနက်ကို သုံးပါတယ်။ ချက်ခြင်းပဲ ဘယ်လိုဆိုတာ နားလည်သွားပါတယ်။ နားမလည်တာ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ကိုပါ။ ကွန်ပြူတာကို သူများနဲ့ မျှသုံးရတော့ ကိုယ်ပိုင် လိုချင်လာပါတယ်။ သူငယ်ချင်းရဲ့ ကွန်ပြူတာကို ဝယ်မယ်ပြောတော့ သူကလည်း လိုလိုလားလား သဘောတူပါတယ်။ ကျနော်က ကွန်ပြူတာရှိရင် အင်တာနက်သုံးလို့ ရပြီ လားလို့မေးတော့ အင်တာနက်အတွက် ဖုံးလိုင်းချိတ်ရမယ်။ (အဲဒီတုန်းက ကွိကွိကွကွနဲ့သံစုံမြည်တဲ့ dial up ကွန်နက်ရှင်ပဲ ရပါတယ်)။ ကျနော်က ကွန်ပြူတာနဲ့အင်တာနက် အတူတူဆိုတော့ သိသလိုလို မသိသလိုလိုနဲ့ နားမလည်ခဲ့ပါဘူး။ အဲသည်လို မရှင်းလို့ မဝယ်ဖြစ်ခဲ့တာကို ကျေးဇူးတင် ရပါတယ်။
ကိုယ်လို ခေတ်မှီအိုင်တီ ရုံးသုံးပစ္စည်းတွေ သုံးခဲ့သူတောင် ဆန်းသစ်တဲ့အရာတွေနဲ့တွေ့ရင် နားမလည် ပါးမလည် ဖြစ်သေးရင် လုံးဝမသိသူများအဖို့ ဘယ်လောက်တောင် ကို့ယို့ကားယား ကသိကအောက် ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို တွေးကြည့်ခံစားနိုင်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းဖုန်းကို ပထမဆုံးကိုယ်ပိုင်ဝယ်ကိုင်တုန်းက အဲဒီဖုန်းကို ဘယ်လိုမှမသုံးတတ်ဖြစ်နေတုန်း အသိတစ်ယောက်က ပါဝါပိတ်လိုက်လို့ ပြောပါတယ် … ပါဝါကို ဘယ်လိုပိတ်ရမှန်း စဉ်းစားလို့မရဘူး … လျှောက်နှိပ်ကြည့်တော့လဲ မပိတ်ဘူး … အဲဒီနဲ့ ရုပ်ရှင်တွေထဲက ဖုန်းပိတ်တော့မယ်ဆိုရင် ဘတ်ထရီကိုထုတ်ပစ်တာကို သတိရသွားပြီး အဖုံးဖွင့်ပြီး ဘတ်ထရီထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … အေးရော ..
( အရမ်းအသက်ကြီးတဲ့ အဖိုးတစ်ယောက်ပြောတာကို အမှတ်တရပြန်ပြောပြတဲ့
ယ္ခု ကျွန်တော်က ပြန်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါသည် )
အခု လ ဆီကို လူတွေ လေယာဉ်ပျံနဲ့ သွားလို့ ရကုန်ကြပြီလို့ 
အိုက်ဒီ အဖိုးသားသားလေးက အဖိုး ကြီးကြီးကို ပြောပြတော့
အဖိုး ကြီးကြီးက အဖိုးသားသားလေးကို
လမင်းကြီးစီကို သွားခြင်ရင် မြောက်ဘက်အရပ်က
စိမ့်ကြီးမြိုင်တောတန်းကြီးကို(ယ္ခုအခါ ထိုတောတန်းကြီးမှ သစ်ပင်တို့ သည် တရုပ်နိုင်ငံသားအဖြစ်ခံယူသွားကြပုံပေါ်သည်)
ကြာမျိုးစုံပွင့်တဲ့ ရေကန်ကြီးကိုတွေ့ လိမ့်မယ်
အဲ့သည်ကန်ထဲမှာ နဂါးတစ်ကောင်ရှိတယ် တော်သလင်းလပြည့်နေ့ မှာ
ဟုပ်ကဲ့..ကျွန်တော်တို့ ဘဘချုပ်ချုပ်ကြီးကလည်း အားကျမခံ လကမ္ဘာသို့ ချစ်ဇနီးကွိုင်ကွိုင်လေးနဲ့ ပျားရည်ဆမ်း ခရီးထွက်ဖို့ အရေး ဇလုံပြန် မှာယူထားပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်….သဂျီးတို့ ကိုအောင်ပုတို့လည်းလိုက်မယ်ဆိုရင် နေပြည်တော် ရှိ (၈ လုံး) ငါရ သူကျ တင်အောင် ငပြူး (သို့မဟုပ်) ရွှေပန်း တို့ထံတွင် စရင်းပေးနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျား……
ရှေ်းက အိန္ဒိယသားတွေ … တရားတွေထိုင်၊ ယောဂတွေကျင့်ပြီး ရှေ့ဖြစ်လှမ်းကြည့်နိုင်တာပေါ့..။
အဲဒီမှာ ..၂၁ရစု… အခုခေတ်ကို လှမ်းကြည့်ပြီး.. မိုးပျံတာတို့။ မြေရှိုးတာတို့။ ဒိဗ္ဗစက္ကူတို့။ လုပ်ကုန်တာပေါ့..။
ဒီလိုပဲ..လူတွေအုပ်လိုက်ကြီး မိုးပေါ်ပျံတာတို့။ ကားပေါ်တက်ပြီး မောင်းထွက်သွားတာတို့။ လမ်းထိပ်က ၇-၁၁မှာ ဈေးဝယ်တာတွေ… မိုးပျံရထားတွေ။ ခေတ်မှီတိုက်ကြီးတွေ။ ငွေထည့်ပြီး စားသောက်စရာထုတ်နိုင်တဲ့ ဗင်းဒင်းမရှင်းတွေ.. စိတ်တန်ခိုးနဲ့ ၀ိုးတ၀ါးမြင်တော့ ..နတ်ပြည်ဆိုပြီး ရမ်းအုပ်တာပဲ..။
နတ်ပြည်ဆိုပြီး … အဆင့်တွေတောင်ခွဲလိုက်သေး..။
ဘိုမရွှေရောင်ဆံပင်၊ မျက်လုံးပြာအသားဖြူမတွေကို ..မြောက်ကျွန်းသူဆိုပြီး အသစ်အဆန်းနာမယ်ပေးထားတာ..။
ဘုရားရှင်လက်ထက်က ..သူဌေးကြီးရဲ့မိန်းမက .. အခုခေတ်ဥရောပတိုက်က စကင်န်ဒီနေးဗီယန်းသူ အဖြူမပဲ..ဖြစ်ရမယ်..။
i want to write posts
but when i click it doesn’t work
ဘုရားများများရှိခိုး မေတ္တာနာနာပို့ကွဲ့ အမောင်ကျောင်းသားရဲ့။
ကမာကျော် နည်းပညာနဲ့တီထွင်မှု အသစ်တစ်ခုထွက်လာတိုင်း ဖန်တီးမှုနည်းပညာဟာကိုယ်နိုင်ငံထဲကဘယ်တော့များမှဖြစ်လေမလဲဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတော့ဖြစ်မိတယ်။
အနာဂတ်ကာလတွင် ဗြိတိသျှ တော်ဝင်လေတပ် (RAF)မှ တိုက်လေယာဉ်မှူးများ အနေနှင့် ရန်သူများအား အကြည့်တစ်ချက်ဖြင့်ပင် ချေမှုန်းသုတ်သင်လာနိုင်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း သိရသည်။ “သေမင်း၏ အကြည့်”ဟု တင်စားနိုင်မည့် နည်းပညာကို RAFမှ ပိုင်းလေ့ာများ ၀တ်ဆင်သော ခေါင်းဆောင်များအတွင်း ထည့်သွင်းရန် စီစဉ်လျက်ရှိသည်။ Strikerဟု အမည်ပေးထားသော ခေါင်းဆောင်းများသည် လေကြောင်းစစ်ပွဲ သမိုင်းတွင် အကြီးမားဆုံး အပြောင်းအလဲ ခြေလှမ်းတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်လာဖွယ် ရှိနေသည်။
နည်းပညာသစ်အရ Strikerကို ဆောင်းထားသော ပိုင်းလော့တစ်ယောက်သည် ရန်သူ့လေယာဉ်ကို ကြည့်လိုက်ရုံဖြင့် ဒုံးကျည်က ထိုလေယာဉ်ကို အလိုလို ချေမှုန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လေယာဉ်မှူး၏ မြင်ကွင်းတွင်ရှိနေသော ပစ်မှတ်ကို Strikerတွင် တပ်ဆင်ထားသော အာရုံခံ ကိရိယာများက ထောက်လှမ်းသိရှိကာ လေယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဒုံးကျည်ကို စေခိုင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းနည်းပညာသစ်ကို အတည်ပြု အသုံးချပြီးပါက ဆယ်စုနှစ်ချီ ကြာမြင့်ခဲ့သည့် လေယာဉ်တစ်စင်းနောက်မှ ချဉ်းကပ်ပြီး ပစ်ချရန် ကြိုးစားရသည့် “Dogfight”ခေါ် လေကြောင်းစီးချင်းထိုးမှု စနစ်ဟောင်းမှာ အပြီးတိုင် ပျောက်ကွယ်သွားဖွယ် ရှိနေသည်။ တစ်ခုလျင် ပေါင်စတာလင် (၂၅၀၀၀၀)ကျော် တန်ဖိုးရှိသည့် ခေါင်းဆောင်းများကို BAE Systemsနှင့် စစ်ဖက်အင်ဂျင်နီယာများက ပုံစံထုတ် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းတို့ကို RAFမှ ခေတ်မီတိုက်လေယာဉ်များဖြစ်သည့် Eurofighter Typhoonများတွင် အဓိကထား တပ်ဆင်သွားရန် စီစဉ်ထားသည်။ “သမားရိုးကျ အနေအထားမှာတော့ ပိုင်းလော့တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်ပစ်မယ့် လေယာဉ်ရဲ့ နောက်ပိုင်းကို နေရာဝင်ယူဖို့ ကြိုးစားရပါတယ်။ ခုတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ရန်သူကို မြင်လိုက်ရုံနဲ့ အတွေးနဲ့တင် ပစ်ချနိုင်ပါတော့မယ်”ဟု Stirkerကို စမ်းသပ်ခဲ့သည့် တိုက်လေယာဉ်မှူး မာ့ခ်ဘိုးမန်းကဆိုသည်။ ယင်းခေါင်းဆောင်များကို Eurofighter Typhoonများအတွက် ပုံစံထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုင်းလော့၏ စိတ်အတွေးမှတဆင့် လေယာဉ်၏ တောင်ပံနှစ်ဖက်အောက်ရှိ ဒုံးကျည်နှင့် စစ်လက်နက်များကို ခိုင်းစေသွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
( ပလမ်းမဲ )
အော်….. ဒါ များ ကို ကြောင် ကြီး က လည်း ခက် တာ ကြ လို. အ သစ် အ ဆန်း ဆို လို. က တော. ကြိုက် ရင် ၀ယ် လိုက် .. ပြီး ရင် က လိ … အင်း က လိ ရင် ပျက် သွား ရင် တော. နောက် တ ခု ထက် ၀ယ် … အဲ တ ခု ကျ ရင် မ ပျက် တော. ၀ူး .. ဟီး ဟီး မ ယုံ ရင် စမ်း ကြည်. ..
လိုင်းဖုန်းတွေ စပေါ်ခါစက မှတ်မိသေးတယ် ။ အဖွားအိမ်ကိုလာလည်တဲ့ အဒေါ်ကြီးက သူ့သားဆီက ဖုန်းလာမယ်ဆိုလို့ လာစောင့်တာ .. ဖုန်းလည်းလာရော ပြေးပြီး ကိုင်လိုက်တာ ဖုန်းခွက်က ဇောက်ထိုးကြီး ၊ ပြီးတော့လည်း ဖုန်းထူးတာ တတ်သလောက်မှတ်သလောက်ထူးတာ ခွက်ထိုးခွက်လန်ရယ်ခဲ့ရဖူးတယ် …
သူ ဖုန်းကိုင်ပြီးပြောလိုက်တာက ဟေ့လူ … ဟေ့လူ… ပါတဲ့
မဆလခေတ်ထဲက ဖုန်းကိုင်နိုင်တာ အတော်ကို လေးစားမိပါတယ်။ မနောတို့ကတော့ ခေတ်မမှီဘူးပြောပြော ခုထိ မကိုင်နိုင်သေးလို ဘယ်ချိန်ဘယ်ကာလများထိအောင် မြင်ဖူးရုံပဲ အဝေးက ကြည့်နေခွင့်ပဲ ရှိနေဦးမှာလဲ မသိသေးပါဘူးလေ…..